Ukuyeka Ukubhema Nogwayi Usizo Lomphakathi We-LGBTQ waseVermont
Ama-Vermonters NGIFUNA UKUYEKA I-LGBTQ
UKUSIZA KAMAHHALA NOKUSEKELAYO KOSIZO LGBTQ
Unamandla anele okuyeka ugwayi. Umphakathi we-LGBTQ ubhema ngezinga eliphakeme kunabantu abaqondile / cisgender, kepha abantu be-LGBTQ banqoba ubunzima nsuku zonke. Ungakunqoba nokulutha kukagwayi, futhi. Sinezinsizakusebenza, amathuluzi nezinhlelo ezenziwe ngezifiso ukukusiza uyeke ukubhema neminye imikhiqizo kagwayi.
Thola umhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo onobungane we-LGBTQ ngokusebenzisa Iphrojekthi Yezempilo Ye-Vermont Diversity . Imikhuba yamalungu izibophezele ekuphepheni, ekuqinisekiseni, ekusekeleni nasekusebenzeni kahle kulabo abasemphakathini we-LGBTQ.
Thola usizo lokuyeka kusuka kuma-802Quits. Funda kabanzi mayelana nosizo lokuyeka ngokwezifiso, kufaka phakathi ama-nicotine patches, i-gum kanye ne-lozenges.
Zilungiselele ukuyeka ngezinyathelo ezithile ezilula, njengokulungiselela ikhaya lakho, indawo osebenzela kuyo kanye nemoto. Funda ukuthi ungalungiselela kanjani.
Vakashela le Inethiwekhi Yomdlavuza Ehlobene Ne-LGBTQ Kazwelonke .
Khuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo mayelana kunemithi noma amaphilisi futhi uyeke usizo olulungele wena.
Uma ufuna ukuqala:
Call 1-800-YEKA-MANJE ngosizo olwenziwe mahhala lokuyeka ukuqeqeshwa ngomuntu ngamunye;
Yeka ku-inthanethi usebenzisa amathuluzi nezinsizakusebenza ezinjengamabhodi emiyalezo, yeka ukuhlela uyeke ukulandela ngomkhondo inqubekela phambili.